» मनहरीमा बन्ला त कार बनाउने उद्योग ?
मनहरीमा बन्ला त कार बनाउने उद्योग ?
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २३:१४
जयराम मोक्तान, मकवानपुर, २४ जेठ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मनहरी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी उद्योग स्थापना गर्ने भनी घोषणा भए अनुसार माटोको नमूना संकलन गरिएको छ । मनहरीको २ वटा वडामा उद्योग स्थापनका लागि शुक्रबार माटोको नमुना संकलन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको ३ जनाको प्राबिधिक टोलीले मनहरीको ६ नम्बरको जोगी ताल र ९ नम्बरको सिमपानीमा उद्योग स्थापनाको लागि माटोको नमुना संकलन गरेको छ । ६ नम्बरको जोगी तालमा रहेको १ सय ६५ हेक्टर तथा ९ नम्बरको सिमपानीमा खाली रहेको १ सय १० हेक्टरको माटोको नमुना संकलन गरिएको हो । प्राधिक टोलीले दुई वटै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भनिएको स्थानको ४ फिट भन्दा मुनिको माटोको नमुना संकलन गरेको हो । नमुनाको रुपमा लगिएको माटो काठमण्डौको प्रयोगशालामा परिक्षण गरी उद्योग स्थापनाको लागि ठिक छ वा छैन भन्ने नतिजा करिब ५ महिना पछि आउने मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती जानकारी दिए ।
विभिन्न विधि तथा प्रविधिको प्रयोग गरि नमुना माटोको परिक्षण गर्ने एक प्राविधिकले बताए । दुबै स्थानको नतिजा सकरात्मक आएमा मनहरीमा पनि बिधिन्न अन्तराष्ट्रिय स्तरका उद्योगहरु स्थापना हुनेछ । गाउँपालिकाको ६ नम्बरमा चाइनिज कम्पनीले कार निर्माण गर्ने उद्योग स्थापनाको लामो समय देखि मुख्यमन्त्रि पौडेलसँग जग्गाको ब्यबस्था गरिदिन आग्रह गरिँदै आएको बताइएको छ । माटोको नमुना संकलन गरिएको दुबै स्थान मानव बस्तीबाट टाढा रहेकाले वातावरणिय हिसाबले उपयुक्त रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । वातावरणिय हिसाबले उपयुक्त जोगिताल लोथ्थोर खोला र सिमपानी राप्ती खोलाको नजिक रहेकाले पनि औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि अझ राम्रो रहेको बताइएको छ । यहाँ उद्योग स्थापना भए स्थानीय युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता समेत हट्ने छ ।